Haweenay tuugsata oo reer Lubnaan ah ayaa bangi ku urursatay lacag dhan $900,000… – Hagaag.com
Haweenay tuugsata oo reer Lubnaan ah ayaa bangi ku urursatay lacag dhan $900,000…
Posted on 3 Oktoobar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Sheekada haweenay reer Lubnaan ah oo dawarsata ama tuugsata oo Millioneer ah Wafa Awad ayaa qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta Lubnaan ka dib markii la ogaadey inay haysato qiyaastii $ 900,000 ka dib markii la xiray bangi ugu keydsanaa lacagteeda ee ku yaala dalkaas.
Bishii Agoosto ayaa dalka Mareykanka wuxuu cunaqabateyn saaray Bangiga Jammal Trust Bank oo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay howlaha Hezbollah, kaasoo u horseeday in la xiro bangiga si kama dambeys ah, sidaa darteed Bangiga ayaa shaaca ka qaaday in haweeneyda da’da ah ee tuugsata, Wafa Awad, ay leedahay rasiid bangi oo ka badan 1 bilyan iyo 399 million oo lacagta Liiraha Lubnaan oo u dhiganta (qiyaastii US $ 900,000).
Dadka ku taxan baraha bulshada ayaa soo dhigay sawir ay faafisay kanaalka reer Lubnaan ee al-Jadeed oo lagu soo bandhigay xawaalado labo bangi isu gudbiyey oo ku qoran magaca Xaajiya Wafa Awad.
Dadka reer Lubnaan ayaa ka sheekeeyay sheekada Xaajiyo Wafa oo ku madadaaleystay si ay ugu qoslaan, waxaa buux dhaafay WhatsApp-ka qisooyin qosol leh oo lagu soo qaatay Xaajiya Wafa iyadoo dadka aad ugu sheekeysanayaan mowduucan, iyadoo weliba ay jirto xiisad dhaqaale oo ka taagan Lubnaan, mid ka mid ah ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray “habka ugu wanaagsan ee lagu sii wadi karo Lubnaan maanta waa dawarsi ama tuugsi.”
Qaar kale ayaa sheegay inay arkeen baahi loo qabo Xaajiyo Wafa ee suuqyada Sayda ee koonfurta, mid kale ayaa sheegay inay ku fiicneyd shaqadeeda, halka kuwo kalena ay sheegeen in garsoorku uu wax ka qabto kiisaska noocaas ah.
Dhacdadan ma ahan tii ugu horreysay ee ka dhacda dalka Lubnaan. Bishii May 2018, ayaa dhacday sheeko ku saabsan haweenay la yiraahdo Fatima Othman, oo la ogaaday markay dhimatay inay leedahay lacag ka badan $ 1 milyan, halka dadka reer Beirut ay sanado badan ku yaqaaneen inay dawarsato.